AnyDesk 3.6.3 Key License 2018 Full Crack for PC & Mac [Latest]
Ikhaya » Crack & activators » AnyDesk Key Ilayisensi 2018
AnyDesk Key Ilayisensi 2018
ngu Emily Kenzie | December 7, 2017
AnyDesk Ilayisensi isofthiwe Ukhiye enokwethenjelwa kakhulu isicelo esisheshayo zonke emhlabeni akude bekhompuyutha kubasebenzisi. Abasebenzisi ngeke bakwazi Finyelela zabo zonke izinhlelo, amadokhumenti, futhi amafayela kusuka kuphi, ngaphandle kokuba ukuphathisa idatha yabo kwisevisi ifu. Odinga ukukwenza ukuze uqalise ukulanda AnyDesk omningi osemqoka mac & pc futhi uqalise ifayela Uhlelo 1.1MB. Akukho ukufakwa noma (kwinethiwekhi) ukumiswa edingekayo. AnyDesk kuyinto esimangalisayo Desktop isicelo Remote olusebenzisa entsha yevidiyo wesici users.Moreover, kuba enemisebenzi, uvikelekile futhi engasindi akusho ukuphazamisa ukusebenza abasebenzisi PC. Isofthiwe AnyDesk omningi osemqoka isebenzisa TLS1.2 ukubethela, futhi zombili imikhawulo uxhumano kuthiwa cryptographically eliqinisekisiwe.
AnyDesk Mac isofthiwe engasindi kakhulu akuthathi isikhala esiningi futhi onomfutho ifayela 1MB, futhi akukho ukufakwa noma zokuphatha amalungelo ziyadingeka. I-UI AnyDesk ilula futhi kulula navigate.With AnyDesk Ilayisensi abasebenzisi Key ungasebenzisa ikhompyutha yabo siqu kusuka kuphi. ngezifiso AnyDesk-ID wabo kuyisihluthulelo Desktop zabo, nazo zonke izinhlelo zakho zokusebenza, amadokhumenti, nezithombe. Okubaluleke kakhulu, idatha yomsebenzisi uhlala lapho kungokwalabo on drive wabo onzima futhi kwenye indawo.
AnyDesk 3.6.3 Crack plus License run Key kwimodi ephathekayo ngokuzenzakalelayo, kodwa abasebenzisi ungakwazi ukuyifaka like nesimiso uma ezikufunayo to.During uxhumano akude asebenzayo, izilungiselelo eziningana zitholakala kalula kusuka kwimenyu bar.AnyDesk ongaguqula uxhumano ukwakha engcono izinga isiqophi, isivinini, noma silinganise phakathi kwalezi zinto zombili. Ngaphezu kwalokho, izilungiselelo nazo ngokwezifiso efana ukubonisa isikhombisi kude, Kudluliswa umsindo, kokuvala yokunamathisela ukuvumelanisa, ukukhubaza ukulawula ngoba ukubuka kuphela, ivimbela ufake abanye abasebenzisi, nokuthatha screenshot.Files kungabuye adluliselwe nge AnyDesk ngokukopisha ukuba ebhodini lokunamathisela nokunamathisela ukuba kukhompyutha yesilawuli kude.
AnyDesk usebenza nge-Linux, MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, futhi Windows XP nhlelo.
AnyDesk Key Ilayisensi 2017 Ukuqhuma Izici
Kulula ukusebenzisa nge friendly interface yomsebenzisi.
izinqamuleli Connection ingagcinwa ukuze Desktop ukufinyelela ngokushesha
Ngesikhathi seseshini, Izilawuli kungenziwa luvulwe phakathi izinhlangothi.
Amashothikhathi kwekhibhodi ingathunyelwa ikhompuyutha, ngisho-Ctrl-Alt-Del.
I-akhawunti yomsebenzisi isithombe se-Windows azobonisa ukuhlonza yabo uma ucela ukuxhuma kwenye ikhompyutha.
Uhlu uxhumano esidlule kuveza ngezansi AnyDesk kutsi bakwati ubudala ukuvulwa lula.
Ulwazi mayelana ikhompuyutha kungabonwa kuthebhu Imininingwane uhlelo.
okuqukethwe Clipboard kungenziwa ivumelaniswa computer aphethe nekhasimende.
Hlanza futhi interface yangaba yinkimbinkimbi futhi zithole ithuba ephathekayo etholakalayo.
Small Usayizi thwebula (nje phezu 1 MB) futhi Usekela Ukudluliselwa kwamafayela.
Ingabe ukusebenzisa ngemodi yesikrini esigcwele futhi babe Kufaka amakhono wengxoxo umbhalo.
Isekela ukuthumela izinqamuleli zekhibhodi.
Download AnyDesk aqhephukile nge 2017 Key License
Faka AnyDesk futhi musa uyivule.
Kopisha ifayela ilayisensi yokufaka lwemibhalo.
← Visual CertExam Suite 4.3.2 Crack I-Adobe Photoshop CC Ukuqhuma →